Xog: Saciid Deni oo isagoo carreysan la xiriiray Kheyre, kana dalbaday sharraxaad - Hoyga Wararka
Home Somali News	Xog: Saciid Deni oo isagoo carreysan la xiriiray Kheyre, kana dalbaday sharraxaad
Xog: Saciid Deni oo isagoo carreysan la xiriiray Kheyre, kana dalbaday sharraxaad
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa si aad ah uga carrooday hadalkii kasoo baxay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ee ku aadanaa imtixaanaadka dugsiyada Puntland.
Cabdulaahi Goodax Bare ayaa sheegay in uu fashilmay Imtixaankii Puntland oo shalay si rasmi ah loo daahfuray, isaga oo yiri “Imtixaan waa fashilmaa, saacadaan la joogo Puntland imtixaan ay qaadeysay wuu fashilmay.
Hadalka Goodax ayaa sida la sheegay aad uga yaabiyey ugana carreysiiyey madaxweyne Deni, maadaama aysan jirin inta la ogyahay imtixaan fashilmay oo baahay.
Deni ayaa la sheegay inuu xiriir deg deg ah la sameeyey ra’iisul wasaare Kheyre kana dalbaday in wasiir Goodax sharraxaad buuxda ka bixiyo hadalkiisa “dhaawaca xooggan ku ah sharafta imtixaanka Puntland.”
eni ayaa sida la sheegay hadalka Goodax u arkay mid ku talo-gal loogu dhaawacayo imtixaanka Puntand, maadaama Puntland kaga guuleysatay Goodax dooddii horey u dhex-martay labada dhinac, kadib markii Puntland diiday inay qeyb ka noqoto Imtixaanaadka wasaaradda waxabarshada Soomaaliya.
wararka maantawararkii ugu danbeeyey
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa weeraray guddoomiyaha gobolka Banaadir
Muuse Biixi oo Ciro dusha u saaray mas’uuliyada dib u-dhaca doorashooyinka
Wakhtiga Rasmiga ah Ee Shidaalka Somalia La Qodaayo...
Madaxweyne Trump Oo Qalinka Ku Duugay Cunaqabateyn Cusub...
Baaritaano xalay laga sameeyay Xaafado ka tirsan Muqdisho
Mooshinka Farmajo: Maxay isku seegeen guddoomiye Mursal iyo...
Daawo Sawirro: Madaxweyne Farmaajo Oo Kulan La Qaatay...
Shabaab oo oday iyo laba nin oo kale...
ONLF Oo ka Hadashay Dagaalka U Dhaxeeya Oromada...